एआईजीको दरबन्दी थपसंगै विश्वराज पोखरेलको आईजीपी बन्ने बाटो क्लियर ! – Khabarhouse
एआईजीको दरबन्दी थपसंगै विश्वराज पोखरेलको आईजीपी बन्ने बाटो क्लियर !
Khabar house | ६ मंसिर २०७७, शनिबार ०३:३५ | Comments
काठमाडौं । नेकपा नेतृत्वको सरकारले नेपाल प्रहरी संगठनको उच्च तहमा केही दरबन्दी थप गरेको छ । सो दरबन्दी थपसँगै नेपाल प्रहरीको आगामी नेतृत्वमा को चयन हुने भन्नेमा अहिले नै करिब स्पष्ट जस्तै भएको छ । सधैँ नेपाल प्रहरी भित्र नेतृत्वको विषयमा विवाद हुँदै आएकोमा पछिल्लो पटक यस्ता विवाद कम हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले प्रहरी संगठनलाई नराम्ररी गिजोलेको थियो भने त्यतिबेला देउवाको चाहनामा जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने कोसिस भएको थियो । तर सो प्रकरण अदालतसम्म पुगेर जयबहादुर आईजीपी बन्ने बाटो त ब’न्द भयो नै कल्पना नै नगरिएका प्रकाश अर्यालको कार्य सम्पादन मूल्यांकन बढी देखिएपछि आईजीपी बनेका थिए ।
त्यसपछि आईजीपी बनेका सर्वेन्द्र खनालको नियुक्ति पनि केही विवादित बन्न पुग्यो भने सोही कारण रमेश खरेलले राजीनामा दिएर हिँडे। हुन त सर्वेन्द्रको विवादको नाली बेली लामो रहेको रहेको छ । तर यहाँ मात्र त्यससताका आईजीपी नियुक्ति सहज ढंगले हुँदै आएको र हाल ओली सरकारले थप गरेको नयाँ दरबन्दी सँगै नियुक्तिमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको बाटो रोकिएको ठानिएको छ ।
ओली सरकार प्रहरी संगठनलाई गिजोल्नु भन्दा यसलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । अझ योग्य र क्षमतावानलाई नेतृत्वको मौका दिनुपर्नेमा पनि स्पष्ट रहेको छ। स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रालय त्यसमा पनि गृहमन्त्री र गृहसचिवकै चाहनाविपरित हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकजना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र ५ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को दरबन्दी गरिएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको चाहना विपरित नै ओलीले संगठनलाई व्यवस्थित बनाउनकै लागि दरबन्दी थप गर्ने निर्णय लिएको एक मन्त्रीले बताए । गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख (सहसचिव) थानेश्वर गौतमले गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दरबन्दी थप गरेको बताए । थपिएको एआईजी पदमा बढुवाका लागि डीआईजीहरु विश्वराज पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा र धीरजप्रताप सिंह प्रतिष्पर्धामा छन् ।
पोखरेल महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी, थापा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र सिंह प्रदेश नम्बर २ प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत छन् । यस अघि हरिबहादुर पाल, निरज शाही र प्रधुम्न कार्कीको एआईजीमा बढुवा भएपछि तीन डीआईजीको दरबन्दी खाली थियो । थपिएकोसँगै ८ वटा दरबन्दी खाली भएको छ ।
त्यसमा गणेश ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, दिवेश लोहनी, देवबहादुर बोहरा, दिलिप चौधरी, राजेशलाल कर्ण, सौरभ राणा र रामकृपाल शाह, उमेश रञ्जित, सुशीलकुमार यादव, मुकुन्द आचार्य, हरिराज वाग्ले, पूजा सिंह, विक्रम चन्द, नलप्रसाद उपाध्याय, देवबहा दुर बोगटी, मोहन आचार्य, राजेन्द्र चौधरी, नरबहादुर खत्री र मोहमद आलम खाँले प्रतिष्पर्धा गर्नेछन् ।
दरबन्दी थप भएसँगै रिक्त दरबन्दीको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । स्रोतका अनुसार एआईजीको दावेदारमा सबै भन्दा अगाडि विश्वराज पोखरेल रहेका छन् । यसअघि नै पनि उनी एआईजी बढुवाको प्रमुख दावेदार थिए । तर संगठनभित्रको खिचातानीले उनी एआईजीमा बढुवा हुनबाट रोकिएका थिए ।
अहिले भने पोखरेल सबैभन्दा सिनियर डीआईजी हुन्। थपिएको एआईजी पदमा बढुवाका लागि ११ जना डीआईजीहरु प्रतिस्पर्धामा छन। डीआईजी पोखरेल, घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, बसन्त कुमार पन्त, ईश्वर बाबु कार्की, सहकुल बहादुर थापा, धीरज प्रताप सिंह, बसन्त कुमार लामा, रवीन्द्रबहादुर धानुक, उत्तमराज सुवेदी र अरुण कुमार बिसी प्रतिस्पर्धामा रहेका हुन् ।
अर्याल, कार्की, पन्त र ईश्वरबाबु कार्की वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीसँगै २०४९ वैशाख १९ गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । आईजीपीकै ब्याचमेट गणेशबहादुर ऐर र पुरुषोत्तम कँडेल अहिले पनि एसएसपी नै छन् । ऐर र कँडेल सँगै घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्की र बसन्त कुमार पन्तलाई पछि पार्दै पोखरेल एसएसपीबाट २०७६ वैशाख १९ गते डीआईजीमा बढुवा भएका थिए ।
उनै पोखरेल अब एआईजीमा सहजै बढुवा हुँदै आईजीपी बन्ने निश्चित रहेको प्रहरी वृत्तमा चर्चा सुरु भइसकेको छ । हाल पोखरेलले महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीको नेतृत्व सम्हालेका छन् भने उनले हालसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राम्रो कार्य सम्पादन समेत गरेका छन् ।
प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सरकारको पछिल्लो निर्णय अनुसार आईजीपीमा प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द भएको छ । अर्थात पोखरेललाई मार्ग प्रशस्त भएको छ । हालका एआईजीहरु आईजीपी थापाकै ब्याचमेट भएकाले उनीहरुको सम्भावना हुने कुरै रहेन । उनीहरुले २०७९ वैशाख १९ गते अवकाश पाउँछन् । जसअनुसार झण्डै एक वर्ष प्रहरीको नेतृत्व पोखेलले गर्ने देखिएको छ ।